Mitondra mankany amin’ny fandriampahalemana ao Meksika ve ny fanomezana ho an’ny tafika ny fifehezana ny filaminam-bahoaka ? · Global Voices teny Malagasy
Mitondra mankany amin'ny fandriampahalemana ao Meksika ve ny fanomezana ho an'ny tafika ny fifehezana ny filaminam-bahoaka ?
Voadika ny 05 Desambra 2018 5:39 GMT
Nanambara ny hanaparitaka ny tafika sy ny polisy federaly hanerana ny faritra sy ny sisitany rehetra ny filoha meksikana: drafitrasa hamaranana ny ady. Sary fampahafantarana navoakan'i www.terceravía.mx.
Navoakan'ny filoha meksikana vao voafidy antsoina hoe Andrés Manuel López Obrador [fr] (fantatra ao Meksika kokoa amin'ny anarana hoe AMLO) tamin'ny 15 novambra 2018 ny antsipirian'ny drafitrasam-pirenena momba ny fiarovana izay ianteherany hamaliana ny herisetra efa miorimpaka ao amin'ny firenena ary efa niteraka fahafatesan'olona maherin'ny 250 000. Ny lohahevitra niadian-kevitra indrindra ary niteraka ahiahy eo amin'ny sehatra maro ao amin'ny fiarahamonina, dia ny fananganana ny garda nasionaly [zandary?] tohanan'ny tafika izay hiandraikitra ny asan'ny polisy sy ny filaminam-bahoaka.
Nandresy i López tamin'ny fifidianana tamin'ny jolay farany teo, ary novereziny lavitra ireo mpifaninana aminy [fr] sy tamin'ny nahazoany ny maro an'isa mari-toerana tsara ao amin'ny Antenimiera, izay ahafahany mitondra ny fanaovaozana heveriny fa ilaina.
Ao anatin'izany toe-javatra izany no nilazan'ny filoha ny drafi-pirenena ho amin'ny filaminana, tolotra iray mamaly ny hetahetan'ny maro an'isa amin'ny mponin'i Meksika : mamerina ny fandriampahalemana ao amin'ny firenena iray izay miditra amin'ny faharoa ambinifolo taona nisian'ny fifanandrinana mitam-piadiana [fr] izay antsoina ihany koa hoe “ady” amin'ny andian-jiolahy, izay efa napoakan'ny filoha Felipe Calderón [fr] tamin'ny androny.
Voarohirohy tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, toy ny tao Tlatlaya, izay nanatanterahan'ny miaramila famonoana ivelan'ny fitsarana ny tafika meksikana (iray amin'ny vondron-kery ho ampidirina ao amin'ny garda nasionaly).
Nanambara [fr] ny talen'ny fandaharana Amerika ao amin'ny Amnesty International – fikambanana iray mijoro manerana izao tontolo izao, ary manana iraka ny hiaro ny zon'olombelona – tamin'ny fanambaràna nataon'i López fa tokony ovaina sy afantoka amin'ny fanamafisana sy fanaovana ho matihanina ny vondrokerin'ny polisy sivily ny tolo-dalàna.
Ankoatra izany, nanamarika tao amin'ny fampitan-kafatra iray ny fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana – ny Human Rights Watch – fa manolotra “paikady diso” hamahana ny krizin'ny filaminana maharary an'i Meksika ny tolo-dalàna. Tamin'ny alalan'ny taleny ho an'i Amerika no niantsoan'ny fikambanana ny filoha López, manasa azy hihevitra indray izay heverin'ny fikambanana ho “politika ratsy torohevitra sy mety hitera-boina goavana”.
Inona ny lazain'ny Meksikana ?
Manasongadina ny hevitry ny mpamakafaka Diego Petersen, nivoaka tao amin'ny SinEmbargoMx, fa tsy avy amin'ny filoha io fanapahan-kevitra io, fa tena fepetra napetrakyny tafika mihitsy :
Efa nomanina hatrany antenantenan'ny fehim-potoana niasan'i Peña ny fanapariahana ny miaramila hitandro ny filaminana. Raha efa an'arivony ny miaramila vonona ny hanangana ny garda nasionaly, dia vokatry ny asa natao tao anivon'ny polisy izany. Niafara tamin'ny fanindrian'ny tafika ny fijeriny sy ny fepetra noraisiny izany.
Efa saika tafajoro io fanapariahana ny miaramila io tamin'ny alalan'ny antsoina hoe lalàna mifandraika amin'ny filaminana anatiny, natolotry ny governemanta teo aloha ary vao haingana no nolazain'ny fahefana mpitsara ho tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana.
Ny fanehoan-kevitra hita amin'ity lohahevitra ity ao amin'ny Twitter no maneho ny ahiahin'ny sasantsasany amin'ny mponina. Mampahatsiahy ny fampiasana tafahoatra ny herisetra izay efa nataon'ny tao amin'ny garda nasionaly ny mpisera “lucía” :
[Ny fivadihana lehibe indrindra dia ny manararaotra ireo lasibatry ny herisetra tao amin'ny “dinika fihainoana” haha-ara-dalàna ny paikadin-dry zareo izay raha tokony hanangana ny fandriampahalemana, dia mbola nanitatra ny ady.] Tsy azo antoka hoe rehefa betsaka ny miaramila eny an'arabe hiantohana ny filaminam-bahoaka dia hivadika ho fihenan'ny herisetra izany. Tsaroantsika rehetra izany Ayotzinapa, Tlatlaya, Palmarito, Ostula, ary ny famonoana an'i Jorge sy i Javier ao amin'ny TEC izany.
Rodrigo_E, izy indray, manoritra fa efa fahazarana eo amin'ireo filohan'i Meksika hatry ny taona maro ny manangana vondrona polisy:
Zedillo nanana ny PFP (Polisy federaly fisorohana), Fox nanangana ny AFI (Sampan-draharaha federaly mpanao famotorana), Calderón nanangana ny PF (Polisy federaly) taorian'ny PFP an'i Zedillo, Peña nitady hanangana ny zandary araka ny fanaon'ny frantsay, ary ankehitriny i AMLO hanana ny garda nasionaly. Inona no mivoaka avy ao ? ka isika tsy manana tetikasam-polisy tafaorina mazava tsara. Hevitra sasantsasany fotsiny mihoatra ny 18 taona.
Ary i “Madame Déficit” indray nahamarika fa tsy tao anatin'ny fandaharan'asa natolotry ny filoha nandritra ny fanentanana ity tetikady ity :
Mampiely ny miaramila eo amin'ny firenena izany tsy natolotry ny patirao masina Lopez Obrador tamin'ny mpanaraka azy. FAHADISOANA izany manapariaka ny tafika sy ny tafika an-dranomasina hanao polisy izany. Avela ho tafavoaka amin'izao ve izy ?
Alejandro Madrazo Lajous naneho hevitra mazava tao amin'ny Twitter hanakanana ny fampielezana miaramila amin'ny firenena :
Anio tsy misy hatak'andro, zava-dehibe ny manondro mazava fa tsy mamitaka na iza na iza ny kilalaonteny. Efa nanandrana ny mpanohana ny lalàna fanonganam-panjakana saingy voatondro tanana. Raha hahazo filaminana tsy misy ady TSIA amin'ny garda nasionaly. Soniavo ny ho amin'ny fandriampahalemana.
Naneho hevitra ny mpanatontosa sarimihetsika Epigmenio Ibarra, mpankasitraka an'i López, fa tsy fanapariahana ny polisy manerana ny firenena no nolazaina tamin'ny lafiny filaminana :
Lazaina ho fanapariahana ny miaramila nefa mifanohitra amin'izany tanteraka ny tolo-kevitr'i Lopez Obrador. Esoriny ny vondron-kery mpiady, ka manolo azy ireny amin'ny polisy miaramila ary manangana ny gadra nasionaly amin'ireo zazavao izay hanova hatrany amin'ny fakany ny tafika mitam-piadiana.
Ixchel Cisneros, mpankasitraka an'i López iray hafa, nizara tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny HuffPost ny tsapany manokana, sady mampahatsiahy tarehimarika vitsivitsy momba ireo olona mangirifiry ao amin'ny nofony ny fiantraikan'ny “ady” :
Nifidy an'i Andrés Manuel sy ireo kandida sasantsasany tao amin'ny Morena [fr] aho ary nanao izany tamin'ny ankapobeny noho ny fanoloran-tenan'izy ireo hanohitra ny fampielezana ny miaramila manerana ny firenena […] Nasehon-dry zareo ny paikadim-pilaminany, izay nahitana fananganana ny garda nasionaly rafetin'ny vondron-tafika “élite” sy ireo hery sivily, arindran'ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena. Izany hoe, ambaratongan-drafitra sivily manoa ny ambaratongan-drafitra miaramila. Izany hoe, manohy sy manamafy ny tetikady tsy nahitana fahombiazana nataon'i Felipe Calderón sy i Enrique Peña Nieto. Tetikady nandamoka tanteraka izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona novonoina miisa 250 000 any ho any miampy olona nanjavona mihoatra ny 37 000.
Tsy isalasalàna fa lohahevitra mila fifantohana sy fanaraha-maso ny fampielezana ny miaramila ao amin'ny firenena iray ho eo ampela-tanan'ny mpitarika iray mpandrendri-bahoaka.